Забур 111 CARS - Nnwom 111 ASCB
Mɛfiri mʼakoma nyinaa mu ama Awurade so
wɔ ateneneefoɔ adwabɔ ne asafo no mu.
2Awurade nnwuma yɛ kɛseɛ;
wɔn a wɔn ani gye ho nyinaa susu ho.
3Ne nnwuma yɛ tumi ne animuonyam,
na ne tenenee wɔ hɔ daa.
4Ɔma yɛkae nʼanwanwadeɛ;
Awurade yɛ ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ.
5Ɔma wɔn a wosuro no no aduane;
6Wakyerɛ ne nkurɔfoɔ tumi a ɛwɔ ne nnwuma mu,
sɛ ɔde aman afoforɔ nsase ama wɔn.
7Ne nsa ano nnwuma yɛ nokorɛ na ɛtene;
nʼahyɛdeɛ nyinaa mu wɔ ahotosoɔ.
8Ɛtim hɔ daa daa,
nokorɛ ne tenenee mu na ɔyɛeɛ.
9Ɔde ɔgyeɛ maa ne nkurɔfoɔ;
10Awurade suro yɛ nyansa mfitiaseɛ;
wɔn a wɔdi nʼahyɛdeɛ so nyinaa wɔ nhunumu pa.
Ɔno na daa ayɛyie wɔ no.
ASCB : Nnwom 111